Ungayifaka kanjani ushukela ingane?
Ushukela awufihliwe kuphela esitsheni seshukela. Usemikhiqizo eminingi ingane idla nsuku zonke. Ukwanda kweshukela kuyingozi. Funda ukuthi ungondla kanjani ingane yakho ngokufanele.
Wake wacabanga ukuthi ushukela ingane yakho idla kangakanani? Amakhukhi, amaswidi, ama-marmalade ... - uyazi ukuthi umthombo omkhulu ushukela ngamaswidi. Ngakho-ke, uzama ukungadluli ngobuningi bawo. Kodwa ushukela nawo uqukethe amajusi, futhi okusanhlamvu, kanye nemigqomo, kanye ne-yogurt yezithelo, lapho umntwana edla ngokuthokoza. Ngisho nalawo mikhiqizo okunzima ukubiza amnandi. Isibonelo, ku-ketchup, isinkwa noma ... kuma-sausages! Ufaka ushukela etiye nasezincwadini oziphekayo. Uma ubala, kuvela ukuthi ingane yakho izodla kuze kube yizinhlamvu ezimbili zeshukela nsuku zonke! Kodwa ukukhululeka kwakhe kuholela ekuguleni, isisindo esiningi nesifo sikashukela.
Yenza ukubheja ngamandla amakhulu
Ngeshwa, izingane zijwayele ukujwayela amaswidi. Lona ukunambitheka kokuqala abangakwazi ukuwabona esiswini sikamama. Ubisi lwebele lubumnandi. Akunakwenzeka ukuba ingane ingacabangi ngokuphelele kulo mdlalo. Kodwa akufanele ukwenze lokhu. Kwanele ukunciphisa inani lokushukela ekudleni, ukulungisela ingane kumaswidi awusizo. Ushukela, njengoba uyaziwa, unikeza umzimba amandla. Ingane, idinga amandla amaningi.
Kodwa ushukela uhlukile. Ngokuqinisekile kwakungukuthi ngemva kokuhamba umntwana wayengenaso isifiso sokudla, futhi wenqaba ukudla kwasemini. Konke ngoba ngesikhathi sokuhamba umntwana wadla amakhukhi ambalwa noma aphuza ijusi. Amaswidi kanye nokudla okunandiwe aqukethe ushukela oguquliwe, ongenanomsoco. Isheshe sithathwe ngumzimba, sandisa ngokushesha i-glucose egazini futhi sinikeza umuzwa wokuzonda. Ngeshwa, isikhathi esifushane kakhulu. Ngemva kokudla umqulu omnandi, ingane ngokushesha ifuna ukudla enye into.
Isimo asifani ne-ushukela, umzimba owenza kancane kancane. Zenziwa ngokuphelele zibe amandla, ezidingekayo ukuze umuntu asebenze, anganiki umqondo ongaqondakali wokuzonda. Izitshalo ziwusizo, okokuqala, emifinini, isinkwa esiphelele sonke, amantongomane. Kungcono ukunikeza umntwana ucezu lwesinkwa ngejamu kunesinkwa se-marmalade. Ukwenza isinyathelo sokuqala sokunciphisa ushukela oguqulwe, kubalulekile ukususa ushukela omhlophe kusuka ekuphumeni kwengane. Ungafaki ushukela itiye, compote noma izithelo sauce. Ukuze uhambe, thatha amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi noma amanzi ajwayelekile abilisiwe esikhundleni sephuzo elimnandi. Futhi uma ubhaka ikhekhe, faka isigamu saleso samba soshukela, okudingekayo ngomuthi.
Izakhamuzi zincoma ukuthi kufanele zenze izithelo ezinhle. I-Nosahar ezithelo - imvelaphi yemvelo, akuyona umthombo wama-calories angenalutho. Okubi kakhulu ngama-juice, okuvame ukuqukethe i-sweetener. I-Tosoki yayine-caloric encane, iwaphule ngamanzi. Izithelo ziwumthombo obalulekile wamavithamini, usawoti wamaminerali kanye ne-fiber. Lokhu kuyindlela engcono kakhulu emaswidi. Esikhundleni sokunikeza umntwana ikhukhi noma i-lollipop, umnike ucezu lwe-apula, ibhanana noma izaqathe. Imifino ingaba yimifula, ama-apricot omisiwe, omisiwe. Izithelo ezimile, ezithengiswa emaphaketheni, ekheniwe ngokusebenzisa ama-sulfur compounds. Kodwa kusengcono kunemaswidi. Ingane enenjabulo yenza i-chips yama-apula omisiwe, amapheya, ubhanana, ngisho nama-carrot kanye ne-beet.
Khumbula ukuthi izithelo ezomisiwe zibhekwa njengenye yezingxenye ezinhlanu eziphakanyisiwe zansuku zonke zezithelo nemifino.
Khetha okuhle kakhulu
Ukuvinjelwa ushukela akukona ukwenqaba kwamaswidi kanye neshukela elimhlophe elilicwengile. Lokhu futhi kunomkhawulo wokusetshenziswa kwansuku zonke ushukela. Ngamanye amazwi, kubalulekile ukukhetha ukudla okuqukethe kancane kangako ushukela oluguquliwe, noma, kangcono, lapho kungekho khona nhlobo.
Nika ukudla kwengane nge-flavour yemvelo, isibonelo i-yogurt, ubisi noma ama-curds. Zama ukushiya imikhiqizo yobisi ngezithelo zokugcwalisa izithelo - ngokuvamile ziqukethe ushukela oluningi. Ungangeza i-tsp 1 ku-yoghurt yemvelo noma i-curse curd. jam nge okuqukethwe okuphansi kweshukela. Esikhundleni se-corn flakes esenziwe ngomumo ushukela, khetha ukudla okusanhlamvu noma ama-oat flakes. Ungafaka kuzo izingcezu zezithelo (fresh, omisiwe) noma amantongomane. I-Ketchup ingena esikhundleni se-tomato unamathele, engenawo ushukela, i-nisoli. Uma kungekho izithelo ezintsha, sebenzisa izithelo ezibandwetshiwe. Ngezinye izikhathi umntwana angadla inaninaphu ekheniwe noma i-peach. Thenga izithelo ezisemathinini kuphela kumusi wakho, hhayi esiraphu. Umqulu omhlophe, esikhundleni se-rye, ungcono kakhulu ngokufaka imbewu ye-ithanga noma imbewu ye-sunflower. Esikhundleni setiyi elimnandi, khipha ingane ibe yintuthuko. Futhi uma unikeza ucezu wekholethilethi, khetha okubabayo (kungcono ngekhwalithi enhle ngokuqukethwe okuphezulu kwe-cocoa).
Indlela engcono kakhulu yokulawula inani ushukela ekudleni kwengane ukulungisa amaswidi kusuka ezithandweni zemvelo. Kuzo zonke zokupheka, ushukela oluncane luqukethe imikhiqizo kusuka emvubelo inhlama. Ngaphandle kwe-baking powder, ama-dyes okufakelwa kanye nezinye izinto ezingalungile. Isiqephu semvubelo sihlangana nengxenye yendwangu yemvelo noma izithelo kuyoba ngumntwana umkhonto ophelele. Kungcono ukudlula isitolo kuzobekwa ubheki noma ibhisikidi. Ijamu elenziwe ngamakhemikhali noma i-jelly lihle kakhulu kunalokho okuthengiswa esitolo. Ikakhulukazi uma ngabe ululungiselela ekuvuneni kwehlobo.
Hlanganisa noma yiziphi izithelo ngeqhwa kanye neshukela elincane-elilungele kakhulu i-ayisikhilimu. Futhi uma uyifaka ekomishini le-yoghurt, uyibeke entanyeni ngayinye bese uyishiya efrijini amahora angu-4, uthola ubuciko obuhle. Ingane yakho iyojabula!
Ingane ayidli kahle
Ingane encane nokudla okuqinile
Amaqebelengwane emangqamu nama-chocolate
Ingabe indoda ingenalo ucansi?
Ukuqala kanjani izinhlungu zomsebenzi
Isobho se-Sorrel noshizi
Ungasusa kanjani i-Cellulite nge-Exercises
Ukukhanyisa egumbini lezingane
Yehlisa isisindo ngesonto
I-pizza enezinhlanzi zasolwandle
Indlela yokulahlekelwa isisindo ephusheni?
Indlela yokususa iphunga lenja